Louise Glück nwetara Nrite Nobel na 2020 na Literature | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Louise Glück nwetara Nrite Nobel na 2020 na Literature
Foto Louis Glück. Ihe ngosi EFE
Louise glück bụ onye mmeri nke Nrite Nobel na Akwụkwọ 2020. Onye America na-ede uri enwetala mmuta akwukwo kachasi elu na uwa ma obu onye nke abuo na oru egwu. Ọ bụkwa nwanyị nke anọ ime ndepụta ndepụta n'ime afọ iri gara aga. Ndị juri ahụ elere ya anya otu a n'ihi "nke ya a na-agbagha agbagha olu uri, bụ́ nke mara mma nke na-eme ka ịdị adị nke mmadụ dịrị n'otu ụwa. '
2 Onyinye Nobel maka akwụkwọ
3 Louise Glück - uri
3.1 Iris ọhịa
Amụrụ na New York na 1943, Glück meriri Pulitzer abu 1993 site Anụ Ọhịa ma emesia onyinye akwukwo nke mba na 2014 maka N'abalị kwesịrị ntụkwasị obi ma na-eme omume ọma. Lee, ọ deziri ya Akwụkwọ Ederede, onye bipụtara utu aha isii: Iris ọhịa, ararat, Họrọ uri, Afọ asaa y Hel.
N'oge ntorobịa ya Glück tara ahụhụ anorexia nervosa, ahụmịhe kachasị mkpa n'oge ọ bụ nwata, dịka o siri kọwaa onye izizi n'akwụkwọ ya. Ọ dị oke njọ ma manye ya ịhapụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị na afọ ikpeazụ ya, na ịmalite ogologo ọgwụgwọ psychoanalysis. Ya ọrụ e dere uri dika chiri anya na, n'otu oge ahụ, zuru.
Onyinye Nobel maka akwụkwọ
N’ọsọ Nobel nke afọ a bụ aha ndị dịka Maryse Conde, na ọkacha mmasị na ịkụ nzọ. Ndị Russia soro ya Liudmila Ulitskayka. Ma mgbe ahụ enwere ndị na-ahụkarị dịka Haruki na-adịru mgbe ebighị ebi Murakami, Margaret osisi, Don Site na Lillo ma ọ bụ Edna O'Brien. Ọ ọbụna sounded anyị Javier Marias.
Onye edemede Nobel nwere Afọ 120 nke akụkọ ihe mere emeNdị edemede 116 ewerewo ya, gụnyere naanị ụmụ nwanyị 16. 80% agaala Europe ma ọ bụ North America. Na izipu asụsụ Bekee megide French, German na Spanish.
Maka ọnọdụ ahụike ụwa, kagbuo nnyefe nke ọdịnala nke diplọma na nrite nke December 10, emume ncheta nke Alfred Nobel. Yabụ afọ a ndị mmeri ga-enweta diplọma na nrite ha na mba ha, na usoro nke eme belata ndị na-ege ntị nwere ike ịgbaso ọ fọrọ nke nta site na nnukwu ọnụ ụlọ obodo dị na Stockholm.
Louise Glück - uri
Ná ngwụsị nke nhụjuanya ahụ, ọnụ ụzọ na-echere m.
Gee m ntị nke ọma: ihe ị kpọrọ ọnwụ m na-echeta.
N'ebe ahụ, mkpọtụ, na-agbagha alaka pine.
Ma ọ dịghị ihe ọ bụla. Anyanwụ na-adịghị ike na-ama jijiji n'elu ala akọrọ.
Ọ jọgburu onwe ya iji dịrị ndụ dịka akọ na uche, lie ya n'ala gbara ọchịchịrị.
Mgbe ihe niile gafere: ihe ị tụrụ egwu,
ịbụ mkpụrụ obi na enweghị ike ikwu okwu,
mechie n'ike. Ala siri ike
dabere ntakịrị, na ihe m weere maka nnụnụ
ọ na-eloda dị ka akụ dị na obere ahịhịa.
Ndi na echetaghi
ngafe nke uwa ozo, asim unu
nwere ike ikwu okwu ọzọ: ihe na-abịa azụ
site na nchefu na-alaghachi
site na etiti ndu m puo
a jụụ mmiri, acha anụnụ anụnụ Onyunyo
na aquamarine achicha miri emi.
Isi mmalite: El Mundo, El País, La Vanguardia
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Asọmpi na Awards » Louise Glück nwetara Nrite Nobel na 2020 na Literature
Onyinye ọ bụla na-atụnye onyinye nke ụdị ụfọdụ, ma ọ bụ na sayensị ma ọ bụ edemede, na m, nwanyị a atụnyela ụtụ iji ruo eruo ụdị ọdịiche a.
Sebastian Roa. Ajụjụ ọnụ: "A dabere m n'akụkọ ọma e dere ede"